Madaxweyne Farmaajo: Dowladda Federaalku waxay dadaal dheer gelisay xasilinta deegaannada Galmudug (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo: Dowladda Federaalku waxay dadaal dheer gelisay xasilinta deegaannada Galmudug (Sawiro)
Madaxweyne Farmaajo: Dowladda Federaalku waxay dadaal dheer gelisay xasilinta deegaannada Galmudug (Sawiro)
Gaalkacayo, 15 Jan 2018; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wadatashiyo la leh madaxda iyo qeybaha bulshada ee Galmudug ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ah ay go’antahay Nabadeynta Gaalkacayo iyo guud ahaan Gobolka Mudug.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo munaasabad soo dhaweyn ah u sameeyey Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa, ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin socdaalka dib u heshiisiinta ee uu ku marayo Madaxweynahu Dowlad Goboleedka Galmudug.
“Madaxweynaha inta uu nala joogay waxaan uga warbixinnay xaaladda guud ee gobolada, annagoona u gudbinay baahiyaha jira, Runtii muhiimad weyn ayuu noo leeyahay socdaalkaagu Mudane Madaxweyne.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo Dowlad Goboleedka Galmudug soo dhaweynta qiimaha badan ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna sheegay in socdaalka uu ku marayo gobolada Galmudug uu yahay mid uu ku xoojinayo Nabadda iyo is dhex-galka Bulshada.
“Maadaama aan cidna kali noolaan Karin waa in dhammaanteen aan danta dalka u mideysannahay, Dowladda Federaalka ah waxay dadaal dheer gelisay xasillinta deegannada Galmudug iyo sidii aan u mideyn laheyn shacabka ku dhaqan.”
Munaasabadda soodhaweynta ah waxaa ka soo qeyb galey Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Guddoomiye Kuxigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare Mudane Abshir Maxamed Axmed, Wasiirro iyo xildhibaanno heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ah, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kale ee bulshada.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo dhagax dhigay dayactirka waddada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo (Sawiro)
Next articleGuddoomiyaha Gobalka Banaadir oo gaaray Dhuusamareeb (Sawiro)